कर्णाली अर्थात् टेरा ईन्कोग्निटा घुम्ने विदेशीको किताब « Rara Pati
कर्णाली अर्थात् टेरा ईन्कोग्निटा घुम्ने विदेशीको किताब
लेखकले यसलाई आफूले तीस बर्षमा गरेको एउटा धेरै सफल परिणाम भनेका छन् तथापि निचोडमा के भनेका छन् भने–“यो खोजले मात्र एउटा कुरा निक्र्यौल गरेको छ कि हामीले नेपालको इतिहासबारे अँझै केही थाहा पाएकै छनौं ।” यसले के इङ्गित गर्छ भने नेपालको इतिहास असाध्यै अपुरो र सम्भवतः बङ्ग्याइएको थियो । उतिबेला शासक रिझाउनका निम्ति लेख्नेहरूबारे उनले भनेका छन्–“जब अनुसन्धाताहरू ठुला शहरकेन्द्रित हुन्छन्, बाँकी देश टेरा इन्कग्निटा बन्छ । जस्तो कि हामी रोम र ल्याटिनका घटनाबारे मात्र जान्दछौं ।”
सदियौंदेखि ओझेलमा परेको कर्णाली क्षेत्रको पुरातात्विक इतिहासको वैज्ञानिक अध्ययन गरी यसलाई बाहिरी संसारसँग परिचय गराउने केही पुराना अध्येताहरू मध्ये प्रोफेसर जिसेप टुचीको योगदान अतुलनीय र निकै अग्रणी छ । यो आलेखमा उनले सन् १९५४ मा यस क्षेत्रको गहन अध्ययन भ्रमण गरेर फर्केपछि सन् १९५६ मा रोमबाट प्रकाशित भएको “प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अन टु साईन्टिफिक एक्सपडिसन्स् ईन नेपाल” पुस्तकको चर्चा गरिएको छ ।
किताबको प्राक्कथनले निकै रोचक सन्दर्भ दिन्छ । लेखकले यसलाई आफूले तीस बर्षमा गरेको एउटा धेरै सफल परिणाम भनेका छन् तथापि निचोडमा के भनेका छन् भने–“यो खोजले मात्र एउटा कुरा निक्र्यौल गरेको छ कि हामीले नेपालको इतिहासबारे अँझै केही थाहा पाएकै छनौं ।” यसले के इङ्गित गर्छ भने नेपालको इतिहास असाध्यै अपुरो र सम्भवतः बङ्ग्याइएको थियो । उतिबेला शासक रिझाउनका निम्ति लेख्नेहरूबारे उनले भनेका छन्–“जब अनुसन्धाताहरू ठुला शहरकेन्द्रित हुन्छन्, बाँकी देश टेरा इन्कग्निटा बन्छ । जस्तो कि हामी रोम र ल्याटिनका घटनाबारे मात्र जान्दछौं ।” देशका कैयौं भागहरूको इतिहास नक्शाङ्कन तथा अभिलेखिकरण नहुँदा ती ठाउँका बारे अरुलाई थाह हुन्न । यस्तो किन त भन्दा नेपालले इष्र्यापूर्वक सदियौंसम्म आफूलाई बन्द राख्यो । कर्णालीजस्ता ठाउँहरू टेरा इन्कग्निटा बने । यसले निकै रहस्यबोध गराउँछ । कसरी शासनसत्ताले काठमाडौंको इतिहास बनायो र कर्णालीका जुम्ला, सिन्जा, दुल्लुजस्ता धरोहरहरू ओझेल परिरहे ।
टुचीले यस अघिका आफ्ना ५ वटा भ्रमणले नेपालको इतिहास भनेको काठमाडौं, पाटन र भादगाउँमा मात्र सिमित रहेको पाएको बताएका छन् । कर्कप्याट्रिक, ह्यामिल्टन, राईट र लेभी जस्ता पुराना विदेशी अध्येताहरू पनि नेपाल उपत्यकका मै कन्द्रित थिए । केही नेपाली विद्वान इतिहासकारहरू जस्तै बाबुराम आचार्य र नयराज पन्तहरूले पश्चिम नेपालबारे केही प्रकाशन गरेका भए तापनि उनीहरू आफैले भ्रमण नगरी उतिबेलाका सरकारी मान्छेहरूले उतार गरेका छिटपुट सामग्रीबाट तयार गरेका थिए । उनीहरूले गरेका सामग्री अनुवादहरू यथार्थमा भन्दा निकै भिन्न हुने गरेको थियो ।
कालीगण्डकी आसपासका चौबिसीराज र जुम्ला क्षेत्रका बाईसीराजको इतिहास, प्रादुर्भाव र अवसानका कारणहरू खासै प्रष्ट थिएनन् । त्यसैले टुचीले नेपालको मध्य तथा पश्चिम भागको अध्ययन भ्रमण थालेका थिए । अढाई दशक तिब्बत अध्ययनको सिलसिलामा उनलाई तिब्बती बुद्धिजम्को प्रभाव हिमालय वारपार क्षेत्रमा कहाँसम्म फैलिएको रहेछ भन्ने जिज्ञासा पनि बढी नै थियो ।
पहिलो चरणको यात्रा सन् १९५२ मा गोर्खाबाट सुरुवात गरेर पोखरा, कालीगण्डकी उपत्यका, मुस्ताङको तिब्बत नेपाल सीमा, मुक्तिनाथ, बाग्लुङ, पाल्पा र रुपन्देहीसम्मको अध्ययन सम्पन्न गरे । दोस्रो चरणको यात्रा सन् १९५४ मा पोखराबाट सुरु गरी टुकुचा हुँदै डोल्पाको छार्काभोट, तराप गाउँ, बारबुङ्गखोला, ठूलीभेरी, तिब्रिकोटबाट जुम्ला उपत्यका पुगे । जुम्ला आसपास, भण्डारीबाडा, मिचा, सिरिढुस्का, धौलापानी, तातोपानी, लिताकोट, नाग्मा, चिल्खाया, कालिकोटमा घुमेर हाउडी लेखको बाटोबाट दुल्लुहुँदै सुर्खेतसम्मको अध्ययन सकेर नेपालगञ्जबाट बाहिरिए ।
उनले यो यात्रा दुई चरणमा सम्पन्न गरे । पहिलो चरणको यात्रा सन् १९५२ मा गोर्खाबाट सुरुवात गरेर पोखरा, कालीगण्डकी उपत्यका, मुस्ताङको तिब्बत नेपाल सीमा, मुक्तिनाथ, बाग्लुङ, पाल्पा र रुपन्देहीसम्मको अध्ययन सम्पन्न गरे । दोस्रो चरणको यात्रा सन् १९५४ मा पोखराबाट सुरु गरी टुकुचा हुँदै डोल्पाको छार्काभोट, तराप गाउँ, बारबुङ्गखोला, ठूलीभेरी, तिब्रिकोटबाट जुम्ला उपत्यका पुगे । जुम्ला आसपास, भण्डारीबाडा, मिचा, सिरिढुस्का, धौलापानी, तातोपानी, लिताकोट, नाग्मा, चिल्खाया, कालिकोटमा घुमेर हाउडी लेखको बाटोबाट दुल्लुहुँदै सुर्खेतसम्मको अध्ययन सकेर नेपालगञ्जबाट बाहिरिए ।
टुचीले भ्रमण गरेका यी ठाउँको नाउँ पढ्दा एउटा स्वभाविक प्रश्न आउन सक्छ । आफ्नो यति महत्वपूर्ण र गहन अध्ययनको लागि उनी सिन्जा किन गएनन् ? वास्तवमा यसको कारण त त्यतिबेला नेपालमा उपलब्ध नक्सामा भएको कमजोरी वा त्रुटिले गर्दा उनको यात्रामा सिन्जा छुटेको रहेछ । उनले सन् १९२८ मा बनेको नेपालको नक्सा बोकेर गएका थिए जसमा सिन्जा सङ्केत नै प्रष्ट थिएन । अर्थात् सिन्जा एक अर्को टेरा इन्कग्निटा थियो ।
टुचीले आफ्नो अध्ययनलाई किताबको रूपमा छापेर वितरण गर्न ठिक्क परेको बेला योगी नरहरीनाथले पनि कर्णाली क्षेत्रको गहन भ्रमण गरेको थाह पाए । योगीले सिन्जा क्षेत्र पनि भ्रमण गरेका थिए । योगीको अध्ययन समेटेर गोर्खाली (नेपाली) भाषामा इतिहास प्रकाश जर्नल आएको थियो । यसबारे टुचीलाई उतिबेला नेपालमा अनुसन्धान गरिरहेका अर्का इटालियन अध्येता उनका चेला, साथी डा. नोलीले जानकारी दिएपछि उनले थाह पाए । उनले योगीको कामलाई सह्राना गर्दै विश्वसनीय सन्दर्भ स्रोत मानेर आफ्नो अध्ययनका निचोडलाई योगीको अनुसन्धानसँग भिडाएर पनि हेरेका छन् । खासगरी खस साम्राज्यसम्बन्धी केही तथ्य र महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा सहमति जनाएका छन् ।
योगीले गाउँगाउँमा लुकेर बसेका तमाम दस्तावेजहरूलाई सङ्कलन, सङ्गठन र प्रकाशन गरी कर्णालीको भव्य इतिहासलाई आम नेपाली पाठक माझ उजागर गरे भने टुचीको अनुसन्धानले कर्णालीको इतिहासलाई पश्चिमा जगतमा स्थापित गराउन भूमिका खेल्यो । यस हिसाबले योगी र टुचीको अन्वेषण निकै हदसम्म एकअर्काको परिपूरक जस्ता हुन् । नत्र उति बेलाका शासक र तिनका आसेपासे विद्वानहरूले कर्णालीको विराट इतिहास र त्योसँगै स्थापना भएका कैयौं कालजयी तथ्यहरूलाई मान्यता किन दिन्थे ? अहिले यी दुई हस्तीका खोज अनुसन्धानहरू कर्णालीको विगत बुझ्न चाहने जो कोहीको लागि पनि मानक सन्दर्भ स्रोतका बनेका छन् ।
योगी नरहरीनाथ कनफट्टा सम्प्रदायका सन्त भएकोले स्थानीयहरूले बिना सन्देह विश्वास र सहयोग गरेका थिए । फलस्वरूप योगीलाई गाउँगाउँबाट पुराना दस्तावेजहरू यथेष्ट सङ्कलन गर्न सम्भव भयो । टुचीको हिमालयखण्ड र तिब्बती इतिहास र संस्कृति र लिपीको गहिरो ज्ञानले ऐतिहासिक र पुरातात्विक तथ्यहरूको रुजू, अनुवाद, विश्लेषण र सम्बन्धहरू स्थापित गर्न सहज भयो । योगीले गाउँगाउँमा लुकेर बसेका तमाम दस्तावेजहरूलाई सङ्कलन, सङ्गठन र प्रकाशन गरी कर्णालीको भव्य इतिहासलाई आम नेपाली पाठक माझ उजागर गरे भने टुचीको अनुसन्धानले कर्णालीको इतिहासलाई पश्चिमा जगतमा स्थापित गराउन भूमिका खेल्यो । यस हिसाबले योगी र टुचीको अन्वेषण निकै हदसम्म एकअर्काको परिपूरक जस्ता हुन् । नत्र उति बेलाका शासक र तिनका आसेपासे विद्वानहरूले कर्णालीको विराट इतिहास र त्योसँगै स्थापना भएका कैयौं कालजयी तथ्यहरूलाई मान्यता किन दिन्थे ? अहिले यी दुई हस्तीका खोज अनुसन्धानहरू कर्णालीको विगत बुझ्न चाहने जो कोहीको लागि पनि मानक सन्दर्भ स्रोतका बनेका छन् ।
उनको जुम्ला यात्राका सुरुवाती दिनमा डोल्पा क्षेत्रमा बोन धर्मको प्रभाव भेटेपनि पुरातात्विक महत्वका विषयहरू तत्कालीन तिब्रिकोटमा त्रिपुरासुन्दरीको मन्दिर पुगेपछि भेट्न सुरु भएको उल्लेख गरेका छन् । रिमी आएपछि काठका कुँदेका बस्तुहरू भेट्न थाले । ती गाउँ स्थापना गर्ने पुर्खाका आकृति थिए । केही तल पुगेपछि जुम्लामा खेतका आली छेउ ढुङ्गाका आकृतिहरू भेटिए । ढुङ्गाका पिलरहरू सुरुमा जुम्ला र अन्तिममा सुर्खेतसम्म भेटिएका थिए । स्तुपाहरूमा ३ फूल, हिमाल, कमल, सूर्य र चन्द्र अनि घोडचढी योद्धाको आकृति भेटिन्छ । थान (मन्दिर)हरू भेटिए । थानमा पनि कुँदिएका आकृति थिए । यो मन्दिर बनाउने वा जग्गादाताको सम्झना राखिएका हुन्थे । ढुङ्गा र रुखमा पनि पूजा गरिएको हुन्थे । टुचीसँगै हिडेको पण्डितले त्यसरी ढुङ्गा र रुखमा भूतको पूजा गर्नेहरू हिन्दु होइनन् भनेर बताएका थिए । टुचीलाई त्यो हिन्दुकरण भै नसकेको सामाजिक परिवेश जस्तो लागेको थियो । यस्तो ठाँउहरू भविष्यको “न्यू आइल्याण्ड अफ कल्चर” हुन् भन्ने लागेको थियो ।
यस क्षेत्रमा टुचीले प्रदान गरेको अतुलनीय योगदान भनेको उनले शिलापत्रमा कुँदिएका बंशावलीलाई तिब्बती अभिलेखसँग भिडाएर उल्था गरी महत्वपूर्ण तथ्यहरू स्थापित गरेका छन् । खस शासनकालका सामग्रीलाई तिब्बतीलाई लामाको बंशावलीदेखि लद्दाखको बंशावलीसम्मका तथ्यहरूसँग भिडाएर पर्गेलिएको छ । नागराजको पालादेखिका चाप, चापल्ल, मल्ल र बम्मसम्मका शासकको बंशावली र शासनकाल खुट्ट्याउने प्रयत्न गरिएको छ ।
यस क्षेत्रमा टुचीले प्रदान गरेको अतुलनीय योगदान भनेको उनले शिलापत्रमा कुँदिएका बंशावलीलाई तिब्बती अभिलेखसँग भिडाएर उल्था गरी महत्वपूर्ण तथ्यहरू स्थापित गरेका छन् । कनकपत्र र अरु दस्तावेजको अध्ययनबाट ऐतिहासिक र पूरातात्विक सम्बन्धहरूको व्याख्या गरेका छन् । तीन अध्यायमा बाँडिएको यस किताबको दोस्रो अध्यायमा जुम्ला भ्रमणको वर्णन छ भने तेस्रो अध्यायले पश्चिम तिब्बत र पश्चिम नेपालका खस शासकको इतिहासको चर्चा छ । यसमा जुम्ला र अँझ विशेषगरी दुल्लु क्षेत्र र सुर्खेतमा भेटिएका दस्तावेज, मन्दिर र शिलालेखहरूको अध्ययनबाट मिलेका तथ्यहरू उल्लेख गरिएको छ । खस शासनकालका सामग्रीलाई तिब्बतीलाई लामाको बंशावलीदेखि लद्दाखको बंशावलीसम्मका तथ्यहरूसँग भिडाएर पर्गेलिएको छ । नागराजको पालादेखिका चाप, चापल्ल, मल्ल र बम्मसम्मका शासकको बंशावली र शासनकाल खुट्ट्याउने प्रयत्न गरिएको छ । यस यात्राको अध्ययनलाई टुचीले नेपालः द डिस्कभरी अफ मल्लाज् किताबमा थप गहन प्रकाश पारेका छन् । त्यसमा खस साम्राज्यको उत्पत्ति, विस्तार र पतनको विस्तृत वर्णन छ ।
टुचीको यात्रामा फोटोग्राफर फ्रान्सिस्का बोनार्डीसँगै थिइन् । यस भ्रमणमा डोल्पादेखि सुर्खेतसम्म खिचिएका ५७ वटा ऐतिहासिक महत्वका श्यामश्वेत फोटाहरू किताबको परिशिष्ट खण्डमा राखिएका छन् ।
किताब प्रकाशन भएर केही पुस्तकालय र केही अध्यताहरू माझमात्र सीमित रहने युगमा यो किताबले निकै चर्चा बटुल्यो । विशाल खस साम्राज्यको अस्तित्वलाई सर्वप्रथम सबै माझ स्थापित गरिदियो । इतिहासलाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गराउने नतिजाहरू तत्कालीन शाही शासन व्यवस्थामा दुर्लभ प्रयास हो तर टुचीको प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तित्वले गर्दा यसको सङ्कलन र प्रकाशन सम्भव भएको हुनपर्छ । अनुसन्धानको क्रममा सङ्कलन गरिएको धेरै महत्वपूर्ण सामग्रीहरू त्यतिबेलाका उनका साथी केशरबहादुर अर्थात केशरशमशेर जबराको सक्रियता र सङ्लग्नतामा अनूदित, प्रकाशित भएको भनि टुचीले श्रेय दिएका छन् । सम्भवतः ती सामाग्रीहरू अँझै केशर पुस्तकालयमा सङ्ग्रहित हुनुपर्छ ।
यति पढिसकेपछि टुचीको व्यक्तिगत जीवनबारे रुचि हुन सक्छ । जिसेप टुची ५ जुन १८९४ मा इटलीको मासेराटा शहरमा जन्मेका थिए । उनी मुसोलिनीका समकालीन थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध र स्पानिस फ्लू चलिरहेको बेला उनले रोम विश्वविद्यालयबाट ग्राजुयशन गरेपछि भारत आएर रवीन्द्रनाथ टैगोरले स्थापना गरेको विश्व भारती विश्वविद्यालयमा पढे । सायद उनलाई भारत वर्षको ज्ञानले आकर्षित गर्यो र उनले ढाका विश्वविद्यालय, बानारस विश्वविद्यालय र कलकत्ता विश्वविद्यालयमा समेत पढे र पढाउने काम पनि गरे । उनले समाज, भाषा, संस्कृति, सम्पदा, पुरातत्वको बहु आयामिक खोज र अनुसन्धान गर्न थाले । यसै सिलसिलामा उनले विभिन्न युरोपेली भाषासँगै संस्कृत, बङ्गाली, पाली, प्रकृत, चिनियाँ र तिब्बती भाषाको समेत गहिरो ज्ञान लिए । उनले पाकिस्तानको स्वात, अफगानिस्तानको घाज्मी, इरानको पर्सिपोलिस र हिमालय क्षेत्रको ऐतिहासिक पुरातात्विक खोज गरे । यिनै विषय समेतका उनले लेखेका ३६० वटा किताब र लेखहरू प्रसिद्ध भए । त्यसैले उनलाई मध्यपूर्वविद्, भारतविद्, पूर्वी एसियाविद्, तिब्बतविद् तथा बौद्धविद् भनेर चिनिन्छ । बुद्धिष्ट अध्ययनको स्थापक वा पिता समेत मानिन्छ । सन् १९८४ मा उनको देहान्त भयो ।
(लेखक चौलागाईं कर्णाली प्रदेश, जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका–५, लाम्रागाउँका बासिन्दा हुन् ।)
प्रोफेसर जिसेप टुची